Intombikazi kaMariya, Unina kaYesu - Ngaba Wayenene Intombi?
Ngaba Wayengumfazi Oyintombi?
Iintetho zeeVangeli zikhomba uMariya njengomama kaYesu. UMarko uchaza uYesu ngokuthi "ngunyana kaMariya." Ngokwesiko lamaYuda, umntu uhlala echazwa njengendodana kayise, nokuba uyise ufile. Mhlawumbi uMarko wayengazange akwenze oku ukuba ukuzalwa kukaYesu kwakungekho mthethweni-ukuba abazali bakhe babengatshatanga kwaye ngenxa yoko, uyise onobomi akayena "uyise" wakhe. Oku kungenxa yoko ukuba uMateyu noLuka bachaza uYesu ngokuthi "unyana kaYosefu" - ukwamukela ukuba uYesu wayengenalo mthethweni kwakungeke kubekho lula kunoko kubakho ngoku kumakholwa.
Ngaba uMariya Waphila Ngaphi?
Iincwadi zeendaba ezilungileyo aziboneli ngcaciso malunga nokuba uMariya wazalwa okanye xa efa. Nangona kunjalo, ukuba uYesu wazalwa ngo-4 BCE kwaye wayengumntwana wakhe wokuqala, ngoko uMariya wayenokuzalwa ngaphambi kwe-20 BCE. Iimfundiso zamaKristu ziye zazalisa izikhelo ezinje ngokudala amabali amaninzi ngamabali okuphila kukaMariya, ekugqibeleni, mhlawumbi ayengathembekanga kunokuba ulwazi oluncinane luqulethwe kwiimibhalo zeendaba eziye zenziwa ukuba zizalise iimfuno zezobulo .
Uphi uMariya Waphila?
Iincwadi zeendaba ezilungileyo zichaza intsapho kaYesu njengoko ihlala eGalili . ULuka, uMateyu, noYohane, nangona kunjalo, bachaza imvelaphi yakhe eBhetelehem, eseJudiya. Iingxabano kunye neengxabano ezifana nale ncediso zixhasa isiqinisekiso sokuthi iincwadi zeendaba ezilungileyo zingathembeki malunga nolwazi oluyisiseko oluchanekileyo kwaye ke alukwazi ukuthenjwa. AmaKristu amaninzi afaka ukholo olupheleleyo kunye nokuzithemba kwiibali zeendaba ezilungileyo, kodwa kukho ngaphantsi kunokuba kunokuthenjelwa kunokuba abantu banokuqonda.
UMarko ubonisa uMariya ngokungathandekiyo, ebonisa ukuba phakathi kwabo bacinga ukuba uYesu uhlekisiwe. Abanye abalobi beendaba ezilungileyo babonisa ngokuthe tye nangokunceda ubulungiseleli bukaYesu kwezinye iimeko. ULuka, umzekelo, ubeka kuye isidlo sokugqibela kunye nabapostile bakaYesu kunye nomnye walabo abafumana uMoya oyiNgcwele .
Ukwahlukeka kokubonakaliswa kubangelwa ngenxa yokuba amabali kunye nabalinganiswa bonke badalwe ukuzalisa iimfuno ezithile zesayensi kunye noluntu kunye nabalobi, kungekhona ngenxa yokuba babonisa ngokuchanekileyo nantoni na eyenzekayo. Uluntu lukaMarko lwaluhluke kuLuka, ngoko badala iingxelo ezahlukeneyo.
Kutheni UMariya WayengumNtombi?
Kwizithethe zamaKatolika, uMariya ubizwa ngokuba yiNtombikazi kaMariya ngenxa yemfundiso yobuntombi bakhe obungapheliyo: nangona emva kokuzala uYesu akazange abe nobuhlobo bobulili nomyeni wakhe, uJosephus, kwaye akazange azalwe nabanye abantwana. AmaProthestani amaninzi ayakholelwa ukuba uMariya wayeyintombi, kodwa ininzi, akuyona imfundiso yokholo . Ukubhekisele kubazalwana kunye noodade bakaYesu kwiincwadi zeVangeli kukubonisa ukuba uMariya akazange ahlale engumfana. Le ngenye yeemeko ezininzi apho imfundiso yobuKristu yemveli iqhubana ngokubambisana ngokubhekiselele kwimiyalezo eBhayibhileni. Ngenxa yokukhetha, amaninzi amaKristu ahamba ngesithethe.
Kutheni Imfundiso Yobomi Bunaphakade Iyimfuneko?
Ubuntombi bukaMariya obunaphakade kuthetha ukuba nguye umntu ukuba abe ngumama nentombi; ngokungafani nabanye abafazi, ubalekela isiqalekiso sikaEva. Amanye amabhinqa aqalekisiwe ngesini esenza abantu balawulwe baze bawaphephe.
Oku kwenzelwe kwiNkcubeko yobuKristu inyulu-intlondi yokuzibulala: bonke abafazi bayizintombi ezilandeleyo ezinyathelweni zikaMariya (njengokuba ngumfundisi) okanye abalandela kwiinyawo zikaEva (ngamadoda alinga nokubenza benze isono). Oku, kwanceda ukunciphisa amathuba okuba besetyhini kulo lonke uluntu.
Kutheni Ubalulekile Ukuba uMariya EbuKristwini?
UMariya uye waba ngqalelo kwiimfuno zowesifazane ngaphakathi kobuKrestu, kuninzi kwiinkokeli zamaKristu ezikhetha ukugcina ubuKristu inkolo elawulwa yindoda. Ngenxa yokuba uYesu kunye noThixo bavakala ngokucacileyo kwiimpawu zendoda, uMariya uye waba ngowolunye ulwalamano olusondeleyo kobuthixo ababenayo amaKristu. Ugxininiso oluqinileyo kuMariya lwenzeke kwiCawa yamaKatolika, apho into ehlonelwayo (abaninzi abaProthestani baphosisa oku kunqulo, into abecinga ukuba bayinyelisa).
Kutheni uMariya ebalulekileyo?
UMariya uye waba ngqalelo kwiimfuno zowesifazane ngaphakathi kobuKristu. Ngenxa yokuba uYesu kunye noThixo ngokuqhelekileyo bachazwa ngokwemiqathango yamadoda kuphela, uMariya uye waba ngowokuqhagamshelana nolwalamano olusondeleyo kubomi abantu ababenabo. Ugxininiso oluqinileyo kuMariya lwenzeke kwiCawa yamaKatolika, apho into ehlonelwayo (abaninzi abaProthestani baphosisa oku kunqulo, into abecinga ukuba bayinyelisa).
Kwizithethe zamaKatolika, uMariya ubizwa ngokuba yiNtombikazi kaMariya ngenxa yemfundiso yobuntombi bakhe obungapheliyo: nangemva kokubeletha uYesu akazange abe nobuhlobo bobulili nomyeni wakhe, uJosephus , kwaye akazange azalwe nabanye abantwana. AmaProthestani amaninzi ayakholelwa ukuba uMariya wayeyintombi, kodwa ininzi, akuyona imfundiso yokholo. Ngenxa yokubhekisela kubazalwana noodade bakaYesu kwiincwadi zeVangeli, abaninzi bakholelwa ukuba uMariya akazange ahlale engumfana.
Iphrofayili kunye ne-Biography kaMateyu umpostile
Isikhokelo sokufundisa isiNgesi - ISL yoCwangciso lweKharityhulam
I-Glokespeare ye-Globe Theatre
Ukudibanisa okulula "kwi-Quitter" (ukushiya)